Ma Lugood abid soo gaarto sida ay adag tahay in aad isticmaasho si aad u? Ama waxaa laga yaabaa in aad kaliya ma jeclahay qaabka ay u egtahay? Wax kasta oo laga yaabaa in kiiska, oo waxaannu idiin keenaynaa ugu sareysa 5 maamulayaasha gurmad Lugood. Iska hubi!
1. Wondershare Dr.Fone ee macruufka
Wondershare Dr.Fone Ee macruufka (kabashada xogta iPhone)
Wondershare Dr. Fone waa software awood leh ee ay Wondershare. Software Tani waa la jaan qaada ah kuwaasoo ahaa updates ugu dambeeyey ee wax soo saarka Apple. Taas waxaa ka mid waafaqsan yahay Lugood 12.2.1, macruufka 9.0, iPhone 6 iyo iPhone 6 Plus.
Feature ugu muhiimsan ee Wondershare Dr.Fone tahay awooddiisa ah inuu ka soo kabsado nooca xogta kasta. Waxaad soo kaban karto xogta si toos ah uga qalab macruufka ah, ama xitaa ka Lugood ama iCloud gurmad. Software ayaa awood u in aad ka bogsato aad sawiro, videos, music, laakiin sidoo kale xiriiro, fariimaha, wac taariikhda, farriinta, cod Deymaha maqan, qoraalada iyo xusuusinta. Intaa waxaa dheer, waxa kale oo aad soo kaban karto xogta app ka codsiyada sida iMovie, iPhoto, shidin, WhatsApp iyo qaar badan.
Ka sokow fursadaha kabashada awood badan, Wondershare Dr.Fone uu awood u leeyahay si uu u xaliyo qalab macruufka shaqo gaba. Versions New of software this siiyaan fursad u "dayactir macruufka in caadiga ah." Doorashadan waxa kaa caawin kara inaad ka takhalusaan arrimaha sida screen cad, shaashadda madow oo kale, taas oo si cillad keeni qalab aad. Doorashadan waxa aanu keeni khasaaro xog kasta, laakiin ka dib waxa la isticmaalayo qalab aad ka heli doonaa update macruufka dambeeyay. Sidoo kale, qalabka jailbroken la cusbooneysiin doonaa si aan jailbroken, iyo qalabka macruufka xidhin mar kale dib-u-xiran doonaa.
2. Lugood Manager kaabta u iPhone, iPad, iPod Touch iyo
Tababare kaabta Lugood kuu ogolaanaya in aad si fudud u dhirtuba, aragti, iyo wareejiyo dhoofin aad files gurmad. Software waxaa kaloo loo yaqaan Lugood Data Recovery oo loo abuuray by Tenorshare. Ka sokow soo saarida iyo dhirta Lugood gurmad files software this sidoo kale ku wareejinaya faylasha gurmad in files akhrin karo oo qaab oo aad computer taageertaa. Tusaale ahaan, farriimaha aad, qoraalada iyo wac taariikhda la dhoofiyo karaa qaab .txt ama .xls on your computer.
Tababare kaabta Lugood aad u faa'iido badan marka aad la kulantid khasaaro xogta, iyadoo aan loo eegayn waxa sabab u yahay. Waxaa laga yaabaa inaad la tirtiro faylasha si qalad ah, ama macruufka hagaajinta dambeeyay iyaga tirtiray. Ama, aad in goobaha warshad ama JAILBREAK ay sameeyeen, iwm software Tani waa mid aad u fudud in la isticmaalo, taas oo keenta in ay soo jiidasho leh marka bedelanaya ama ku arkaysid files on Lugood aad soo celiyo qalab aad. Tababare kaabta Lugood waa la jaan qaada oo dhan nidaamka Windows ka hawlgala, iyo sidoo kale la Mac OS X.
Tababare kaabta Lugood aad u deggan oo waxa ay leedahay ratings wanaagsan. Ka hor inta iibsan software-ka, waxaad leedahay awood ay ku tijaabiyaan. Version xorta ah ee Maareeyaha kaabta Lugood kuu ogolaanaya in aad aragto oo dhan ee aad files gurmad iyo dhoofiyaan saddex files ugu horeysay ka qeyb kasta.
3. iBackup robot u Lugood
iBackupBot u Lugood waa software ah in aad siisaa awood ay uga dhirtuba, aragtida, dhoofinta iyo edit files la xoojiyaa si ay u Lugood. Haa, aad akhriday waxa uu xaq u leeyahay. Xitaa in aad edit karaa faylasha aad xoojiyaa. Software waxaa bixiya iCopyBot.com, taas oo ah koox yar oo ka mid ah mid Gutay Ballankii Software Co, Ltd.
iBackup robot waa mid aad waxtar u leh haddii aad soo iibsatay oo ah qalab cusub macruufka iyo u baahan tahay xog ka qalab jir wareejiyo. Software wuxuu kuu ogolaanayaa inaad si ay u gudbiyaan (sokow music, sawiro iyo videos) qoraalada, fariimaha qoraalka ah, xiriirada, dhawaaqa iyo widget goobaha iyo xitaa ka sii badan. Waxaad xitaa sawiro ka camera duudduuban oo ku wareejin karaa.
Lahaanshaha iBackupBot u Lugood on your computer aad si fudud u samayn kartaa:
• Browse oo dhan files gurmad iyo si fudud u heli kuwa aad u baahan tahay;
• dhisay-in muuqaalada Isticmaal iBackupBot ee, sucha sida Editor, Editor Text, Hex Editor, siladda Database, siladda Image, SMS Message siladda, Notes siladda, Call History siladda, Cinwaanka Book siladda oo dheeraad ah.
• iBackupBot ee la dhisay-in Browser Media kuu ogolaanaya in aad si aad u eegto iyo dhoofin oo dhan files warbaahinta sida sawiro liiska camera, qoraal cod, farriinta, fariin SMS multimedia iyo warbaahinta file ah barnaamijyadooda;
4. MyJad shawladda kaabta Lugood
Lugood ee kaabta shawladda la yaab leh software kale maamul Lugood. Software waxaa sameeyay MyJad, shirkad yar oo in la aasaasay 2012 Lugood ee kaabta shawladda awood aad si fudud u soo celiyo dhammaan faylasha in aad hore u badbaadiyey in Lugood aad.
Ka dib markii la isticmaalayo qalab macruufka, waa wax caadi ah haddii a dhibaatooyin dhowr kac. Tusaale ahaan, marka jailbreaking qalab aad waxaad waayi kartaa qaar ka mid ah macluumaadka aad. Your phone noqon baahdo ka dib marka la jebiyey, oo burburay ama xitaa la xaday. Software Tani waxay kaa caawin doontaa in aad soo celiyo dhammaan xogta aad muhiim macruufka, haddii aadan overwrite Lugood gurmad files mar xogta lumay.
Lugood ee kaabta shawladda aad u saamaxaaya in ay ku eegaan dhammaan faylasha aad ka hor soo kabsaday. Marka ay timaado in soo kabashada, ku dhowaad aad soo kaban karto, nooc kasta file ka qalab aad. Software Tani taageerada sanaanayaa photos, xiriirada, jadwalka taariikhda, qoraalo, SMS, iMessages, fariimo WhatsApp, voicemails, abuse wac, xogta aad app iyo xitaa Bookmarks Safari.
Lugood ee kaabta shawladda waxaa laga heli karaa oo keliya Windows, oo waxaad isku dayi kartaa software ka hor iibsato.
5. Jihosoft Lugood ee kaabta shawladda
Waxaa laga yaabaa inaad u muuqdaan qasan kadib markii uu arkay magac la mid ah labo jeer, laakiin ha ka welwelin, qalad aan ugama dhigin. Software waxa uu leeyahay magac la mid ah sida mid ka mid ah (Lugood ee kaabta shawladda) hore u soo sheegnay, laakiin waxaa jira kala duwanaan yar. First of dhan, ay ku jiraan laba Softwares gabi ahaanba ka duwan tan iyo mid horumarsan by Jihosoft.
Sida hore u soo sheegnay Softwares, Jihosoft Lugood ee kaabta shawladda waxa uu leeyahay oo dhan. Waxaad si fudud u soo saaro karo iyo soo celinta aad muhiim files gurmad ka Lugood. Software Tani waxay kuu ogolaanaysaa inaad soo saaro faylasha sida qoraalo, xiriirada, SMS, lifaaqyada SMS, fariimo WhatsApp, lifaaqyada WhatsApp, jadwalka taariikhda, xusuusinta, Bookmarks Safari iyo faylasha dabcan ka camera oo duudduuban il sawir, iyo app sawiro kale oo videos.
Farqiga ugu weyn ee u dhexeeya software tan iyo softwares hore u soo sheegnay waa in Jihosoft Lugood ee kaabta shawladda oo gebi ahaanba bilaash ah. Waxaad kala dooran kartaa nooca caadiga ah iyo version xirfadeed. Nasiib darro, software waxaa kaliya loogu talagalay Windows heli karo.
> Resource > Lugood > Top 5 Lugood Maareeyayaasha kaabta